Factory kutenderera - Xuzhou Goldfire chitofu Co., Ltd.
12 Volt Ovhheni
Unyanzvi Simba Kuratidzira Kweiyo Kambani
Kubva pakagadzwa, kambani yakagara yakanamatira kune sainzi uye tekinoroji seye mutungamiri, musika-wakatarisana, teerera kune hunyanzvi hwesainzi uye tekinoroji, kuvandudza kugona kwekutsvaga kwakazvimirira nekusimudzira kwemabhizinesi, mhanyisa kukura kwemabhizinesi.
Kwemakore mazhinji, isu tanga takazvimiririra kuvandudza zvigadzirwa, senge FO-05 akateedzana, FO-07 akateedzana ndeedu pachedu kutsvagisa nekusimudzira, hazvisi kuwedzeredza kutaura kuti simba redu rehunyanzvi, kutonga kwemhando yepamusoro, dhizaini uye kugona kugona kuri iyo inotungamira nhanho yeindasitiri.
Tine yakanakisa yekutsvagisa uye timu yekusimudzira, yakatsaurirwa kuvandudza nekusimudzira zvigadzirwa zvitsva. Inogona kugadzirirwa vatengi, kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi.
Goldfire Stove ikozvino inokwanisa kugadzira anopfuura zana marudzi akasiyana ezvigadzirwa, ayo anonyanya kutarisa panzvimbo yemoto yehuni inopisa moto, chitofu chebibi, chitofu chekudzika musasa, chitofu chetende, chitofu chesimbi isina simbi, gomba remoto zvichingodaro. 90% yezvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kuEurope, Australia, USA nedzimwe nzvimbo dzakasimukira. Isu tinokwanisa kusangana nezvinodiwa pamusika, kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye kubatsira vatengi vedu kubudirira.
Muna Kurume 2020, isu takatora chinhano muHBBEXPO muUnited States. HPBExpo ndiwo mukana wakanakisa wekubatana zvakare neindasitiri uye kuwana izvo zvazvino maitiro, tekinoroji uye kudzidziswa.
Yakavakirwa muLouisville, nzvimbo yeHBBExpo inokwezva vatengesi vepamusoro vanouya kuzoona vatengesi vachiratidzira zvigadzirwa zvavo zvazvino uye zvitsva izvo vatengi vako vachange vachida mwaka unouya
Takawana zvakawanda nekutora chikamu muchiratidziro ichi.
Maitiro ebhizinesi uye mhinduro dzinogadzirisa matambudziko nemikana yemusika uripo.
Mikana yekushandira pamwe nema veteran emabhizimusi, mabhizimusi matsva nevatengesi vepamusoro - inzwa zviri kushanda uye kuti vamwe vari kuchinjika sei mune zvakajairika zvemazuva ano.
Mhinduro inoshanda iyo inogona kushandiswa nekukurumidza kugadzirisa kugutsikana kwevatengi.
4.Kuwana kune iyo indasitiri yazvino hunyanzvi mune yakawanda-inoshanda fenicha, bhengi tekinoroji, uye choto uye patio-kudziyisa michina.
Uye zvakare, isu tinowanzotora chikamu mune mamwe epamba uye epasi rese kuratidzira, kuburikidza neshoo yekunzwisisa kwedu zvakwakanakira pamusoro pevakwikwidzi vedu, ndiko kunonzi kuzviziva iwe nekuziva muvengi, zana zana rehondo, isu tinogara tichichengeta moyo unodzidza uye unokatyamadza.
Zvigadzirwa zvikuru zvakapfuura bvunzo yeEU CE, yasvika kuEcodeign 2022 yakajairwa uye yakawana chitupa cheAmerican EPA. Iyo inozivikanwa neatatu masisitimu epasi rose ehunhu, nharaunda, hutano hwebasa nekuchengeteka.
Runhare: + 86-13952235576
Kero: Kwete. 8, Changxing Road, Tongshan High-tech Development Zone, Xuzhou, Jiangsu, China
Tende Wood Inopisa Chitofu, Bindu Kubika Chitofu, Kunze Kwehuni Kunopisa, Musasa Wood Burner, Camping Stove Mvura Tangi, Stainless simbi chitofu,